माधव नेपाललाई जनताको एउटै प्रश्न तपाईले केपी ओलीभन्दा के राम्रो काम गर्नुभयो ? - Updatekhabar.com Updatekhabar.com
माधव नेपाललाई जनताको एउटै प्रश्न तपाईले केपी ओलीभन्दा के राम्रो काम गर्नुभयो ?
सुर्खेत। एमाले उपाध्यक्ष एवं कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज युवराज ज्ञवालीले नेताहरुको झगडाका कारण पार्टीमा विभाजन आएको बताएका छन् । मंगलबार बिहान एमाले पार्टी कार्यालय सुर्खेतमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेताको सनकका भरमा पार्टी विभाजन भएको उनले आरोप लगाए ।
माधव नेपालले पार्टी विभाजनका लागि एक महिनासम्म हरप्रयास गरेको ज्ञवालीले दाबी गरे । ‘एक महिनासम्म उहाँले हामीलाई पार्टी विभाजनका लागि कन्भिन्स गर्नुभयो । हामीले एक महिनासम्म पार्टी एकताका प्रयास ग(यौं,’ उनले भने, ‘अन्ततः उहाँले पार्टी एकताभन्दा विभाजनको बाटो अंगाल्नुभयो ।’